Chidzidzo Chekudzidza Kubva muPisarema 150 | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Mavhesi eBhaibheri Chidzidzo Chekudzidza Kubva muPisarema 150
Chidzidzo Chekudzidza Kubva muPisarema 150
Nhasi tichange tichidzidzisa chidzidzo chekudzidza kubva muPisarema 150. Pakati pebhuku rakawandisa reMapisarema murugwaro, Mapisarema 150 akanyatsodzidzisa zvakawanda pamusoro pekubudirira kwekurumbidza Mwari uye nei tichifanira kurumbidza Mwari. Mambo David anoonekwa semurume anemoyo waMwari nekuti ainzwisisa kushanda kwekurumbidza uye mashandisiro aro nemazvo. Hazvishamisi kuti, Mwari aigara achikurumidza kuregerera David pese paanotiza kubva pamberi paMwari.
Kekutanga nguva Mwari paachapupura pamhando yehukama huripo pakati pewenyama hwaive panguva yaAbrahama Isaya 41: 8
“Asi iwe Israeri, uri muranda wangu,
Vana vaAbhurahama shamwari yangu. Kutenda kwaAbrahama kuna ishe kunomuwanisa iye zita rekuremekedza shamwari yaMwari. Uye Mwari akataura kuti ini handizoita chero chinhu ndisina kuudza shamwari yangu Abraham. Anotevera munhu akave nehukama hwakakwana naMwari aive Mambo David. Chimwe chezvikonzero nei Mwari vakatumidza David murume anoenderana nemoyo wake nekuda kwekurumbidza kwake kusingaperi kuna Mwari.
Mwari vanokoshesa kurumbidzwa kwevanhu. Takadzidziswa nezvekukosha kwekurumbidza Mwari. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanoziva zvikonzero zvakakosha kurumbidza Mwari. Bhuku rePisarema 150 rinotsanangura zvine mutsindo kuti sei tichifanira kurumbidza Mwari.
MAPISAREMA 150 Rumbidzai Jehovha.
Rumbidzai Mwari munzvimbo yake tsvene;
Murumbidzei mudenga rake guru Murumbidzei nokuda kwezvaakaita zvine simba;
Murumbidzei zvakafanira ukuru-kuru hwake. Murumbidzei nokurira kwehwamanda;
Murumbidzei nembira nomutengeranwa. Murumbidzei nengoma nokutamba;
Murumbidzei nohudimbwa nenyere. Murumbidzei namakandira anorira kwazvo.
Murumbidzei namakandira anorira kwazvo. Zvinhu zvose zvinofema, ngazvirumbidze Jehovha.
Ngatisimudzirei nei tichifanira kurumbidza Mwari sechidzidzo chikuru chatinogona kutora kubva muPisarema 150.
Nei Tichifanira Kurumbidza Mwari
Tinorumbidza Mwari Nekuda Kwaari
Mwari ndiye Wemasimbaose. Hapana chinotyisa Ishe, Iye haagoni kuvhundutswa nemunhu chero upi zvake. NdiMwari. Chinyorwa chakaitwa kuti chinzwisise Mwari akasika matenga nenyika uye Akaita nyika chitsiko chetsoka dzake. Izvi zvinoreva kuti Mwari ndiye mukurusa. Ndiye anonyanya simbaMwari Wamasimba Ose.
Zvakare, icho chokwadi chekuti Akatisika nemufananidzo Wake chinoita kuti zvive zvakakosha kuti isu tirumbidze. Uyai tigadzire munhu nemufananidzo wedu kuti ave nesimba pamusoro penyika nezvese zvakasikwa. Chinangwa chekuvapo kwedu kuve nekutonga pane zvese zvakasikwa. Kana Mwari vakatiisa muchinzvimbo ichocho chekutarisa zvese zvakasikwa, zvishoma zvatingaite kurumbidza ukuru Hwake nekutyisa.
Saka chimwe chezvikonzero chatinorumbidza Mwari ndechekuti iye ndiani. Ndiye Mwari wevamwari, maMadzimambo eMadzimambo ese. Mutongi wenyika. Ruremekedzo uye kuvimbika kwatiri kupa vatongi venyika hazvisi chinhu zvichienzaniswa nezvatinofanirwa kupa kuna Mwari.
Tinorumbidza Mwari Kune Kwaanogara
Bhuku rePisarema 150 rinotsanangura chikonzero nei tichifanira kurumbidza Mwari zvine mutsindo. Ndima yechipiri yerugwaro inoti Rumbidzai Mwari munzvimbo yake tsvene. Mwari vanogara munzvimbo tsvene. Nzvimbo inoera pano hazvireve chivakwa chaicho patinoenda kunonamata. Izvi hazvisi zvekupokana nenyaya yekuti kuvepo kwaMwari kunogara munzvimbo inoera. Zvisinei, Mwari anogara mune dzimwe nzvimbo kuseri kwenzvimbo inoera chaiyo.
Chinyorwa chinoti muviri wedu itemberi yaIshe. Tembere apa inorevawo nzvimbo tsvene. Mwari anogara munzvimbo inoera uye Mapisarema anoti tinofanira kurumbidza Mwari munzvimbo yake Tsvene. Anogara pakati pevanhu vake. Izvi zvinoreva kuti hatidi kuenda kukereke kana kunzvimbo inoera tisati tataura naMwari. Kunyangwe kubva mukugara zvakanaka kwemisha yedu tinogona kuwedzera Kunamata kwedu kwakadzama kuna Mwari.
Tinokudza Mwari Nekuti Vakatiita Chombo Chekunamata
Murumbidzei namakandira anorira kwazvo. Zvinhu zvose zvinofema, ngazvirumbidze Jehovha. Rumbidzai Ishe! Sezvatsanangurwa pakutanga, kukosha kwechisiko chedu kushandira Mwari, kumunamata. Mwari vaida zvinopfuura hushamwari kubva kwatiri, Mwari anoda koinonia kubva kwatiri, ndosaka Vakatiita chimbo chekunamata.
Apa ndipo pane hupenyu hwaMambo David hwakatamba chikamu chakakosha. David aive muimbi anoziva kurumbidza Mwari zvakanaka. Kana David ari kurumbidza hapana chimwe chinhu chine basa. Aizokanganwa zvaari nekurumbidza Mwari kunge munhuwo zvake. Kana areka yesungano yadzoserwa kuIsreal, David akatamba kuna ishe. Mukadzi wake akamushora mumoyo make uye anozvidemba zvakaipa.
Musimboti wehupenyu hwedu kurumbidza Mwari.
Isu Tinorumbidza Kuvaka Kushamwaridzana naMwari
Kurumbidza nekunamata kwedu kuna Mwari kunobatsira kuvaka hukama hwakasimba naMwari. Nepo Abrahama akawana nzvimbo yakakwana mumoyo waMwari nechiito chake chekutenda, David akawana nzvimbo mumoyo waMwari kuburikidza nechiito chake cherumbidzo.
Kana tichirumbidza Mwari, tinovaka hukama hwakatendeka naMwari. Kurumbidzwa kunofambisa Mwari uye kunoita kuti tizivikanwe kana tikadana kwaari.
Mapisarema 150 anotidzidzisa kukosha kwekurumbidza Mwari. Isu tiri mudziyo wekunamata uye tinofanira kuedza kurumbidza Mwari nguva dzose. Mwari ega ndiye Mwari uye Iye ega ndiye anofanirwa nekurumbidzwa nekunamata.
Tinofanira kurumbidza Mwari murunako rwehutsvene hwake.
Previous nyaya5 Nguva dzaunogona kushandisa Mapisarema 20
inoteveraMapisarema 51 Zvinorehwa Ndima neNdima
10 Anesimba Mavhesi eBhaibheri eSimba neMinamato
10 Ndima yeBhaibheri Haufanire Kukanganwa Paunenge Uchirwara
Mapisarema 1 Zvinoreva Ndima Ndima
Mapisarema 86 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
Namata Uko Rudzi ReLiberia
20 Minamato yeminamato yebasa rinobatsira